Khin Ma Ma Myo's Blog: March 2011
၁၉၄၅ အလွန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ အချုပ်အခြာအာဏာ ကစားပွဲ (Sovereignty Game) ဆိုတဲ့ သဘောတရားက ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတခုရဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှု (survival) ဟာ စစ်အင်အားဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်နေခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာတလွှားမှာ စစ်ပွဲတွေ၊ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုတွေ၊ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ် ကျင့်သုံးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတခုရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ ကျူးကျော်စစ်တွေအပေါ် ခုခံစစ်စွမ်းပကား (defensive military capabilities) တခုတည်းပေါ်မှာ မူတည်ခြင်း မရှိပဲ အချုပ်အခြာအာဏာ (sovereignty) ကို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးမှုပေါ်မှာ မူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားတွေအရ နိုင်ငံတခုကို အခြားနိုင်ငံတခုက စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု (The Use of Force) အား ထိန်းချုပ်မှုတွေကို Article2(4), Articles (39-51) of UN Charterနဲ့ Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 တို့မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုအား ထိန်းချုပ်ခြင်း (prohibition of the Use of Force) ဟာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ acceptable norm တခု ဖြစ်နေပေမယ့်လဲ အကြောင်းကြောင်းအရရ စစ်အင်အားအသုံးပြုရတဲ့ အခြေအနေတွေလဲ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတခု (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံအစုအဖွဲ့တွေကနေ နိုင်ငံတခုကို စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုကို ဘယ်လိုအချိန်အခါ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ပြုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ၊ လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးမှာ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု (The Use of Force) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Just War Doctrine နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (Humanitarian Intervention) တွေကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
၂၀ရာစုနှောင်းပိုင်းနဲ့ ၂၁ ရာစု စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုတွေမှာ Just War Doctrine ကို အသုံးပြုပြီး ဒီစစ်ပွဲတွေရဲ့ တရားမျှတမှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြပါတယ်။ Just War Doctrine သဘောတရားရဲ့ အခြေခံက laws of armed conflict ရဲ့ functions နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ jus ad bellum (lit. the law towards war) နဲ့ jus in bello (lit. the law in war) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ jus ad bellum က နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားရန်၊ အသုံးပြုမှုအား ကန့်သတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး၊ jus in bello ကတော့ မလွဲမရှောင်သာ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုရတဲ့အခါ စစ်ပွဲတွင်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ လျော့နည်းရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Just War Doctrine အရ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုရဲ့ တရားမျှတမှုကို jus ad bellum နဲ့ jus in bello ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ Jus ad bellum criteria အရ နိုင်ငံတခုဟာ အခြားနိုင်ငံတခုအပေါ် စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုဟာ တရားမျှတကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ဖို့ တရားဝင်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း (legitimate authority), တရားမျှတသော အကြောင်းရင်း (just cause), မှန်ကန်သော ရည်ရွယ်ချက် (right intention), အောင်မြင်မှုအလားအလာ (chance of success), အချိုးအစား (proportionality), နောက်ဆုံးနည်းလမ်း (last resort) ဆိုတဲ့ အချက် အများစုနဲ့ ပြည့်စုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုဖို့ တရားဝင်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာ နိုင်ငံတကာရေးရာမှာ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ UN Charter Article 39 နဲ့ Article 42 အရ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းချောက်လာကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် လိုအပ်မယ့် air, sea, land forces တွေကို အသုံးပြုရတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးကို ထင်ထင်ရှားရှား ထိခိုက်မှု မရှိလို့ပဲဖြစ်စေ၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အားနည်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီက စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု ခွင့်ပြုချက် မပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
အဲဒီအခြေအနေတွေမှာ ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအနေနဲ့ စစ်ရေးအင်အားကို အသုံးပြုရတဲ့ အခြေအနေတွေလဲ ရှိလာပြန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးရမယ့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ရန်ရှာလာတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားပြိုလဲသွားပြီး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ အုပ်စုတွေ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို စစ်ရေးအင်အားသုံး ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း ရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာရာကနေ The Right to Protect (R2P) သဘောတရားတွေပါ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Jus ad bellum criteria အရ ဒုတိယအချက်ကတော့ တရားမျှတသော အကြောင်းရင်း (just cause) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ တရားသော အကြောင်းရင်းတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး အကြောင်းရင်းကတော့ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း (self-defence) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံတခုက စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင် စစ်အင်အားအသုံးပြုပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ရေးလေ့လာသူများအကြား အငြင်းပွားစရာ အချက်တခုကလဲ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ မိမိနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို စစ်ရေးအင်အားသုံး တိုက်ခိုက်မှု (preemptive self-defence) ဟာ တရားမျှတသော အကြောင်းရင်း ဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်း ဆိုတာပါပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အာဖဂန်နစ်စတန် နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မှုဟာ ဒီသဘောတရားပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။
နောက်ထပ် အချက်တခုကတော့ မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက် (right intention) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှုဟာ အာဏာလွန်ဆွဲဖို့အတွက် မဟုတ်ရပါဘူး။ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေမှာ ရေရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေး (sustainable peace) နဲ့ လူသားလုံခြုံရေး (human security) ကို တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီအချက်နဲ့ စစ်အင်အား အသုံးပြုမှုရဲ့ တရားမျှတမှုကို တိုင်းတာသုံးသပ်ကြပါတယ်။
နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ အချက်ကတော့ အောင်မြင်နိုင်သော အလားအလာ (chance of success) ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုမှာ သူရဲကောင်းဝါဒ (heroism) ကို အခြေခံတဲ့ suicide missions တွေကို ပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပဲ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပရော်ဖယ်ရှင်နယ် စစ်တပ်တွေနဲ့ စစ်ရေးနားလည်သူတွေက အောင်မြင်နိုင်သော အလားအလာ မရှိတဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ တန်ဖိုးရှိပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ရည်မှန်းချက် (valuable and clear goals) တွေ မရှိပဲ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှုဟာ တရားသော စစ်မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ပွဲဆိုတာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာနယ်မြေဒေသက ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို တိုက်ရိုက် ခြိမ်းချောက်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်နိုင်သော အလားအလာကို တွက်ချက်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့ ရည်မှန်းချက် သတ်မှတ်မှုတွေကို စစ်ပွဲမစခင်ကတည်းက ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အချက်ကတော့ အချိုးအစား (proportionality) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှုဟာ ခြိမ်းချောက်မှု၊ မတရားမှုတွေ ခံစားရမှုတွေအတွက် မှန်ကန်သော အချိုးအစားနဲ့ အသုံးပြုမှုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက နိုင်ငံတနိုင်ငံကို စစ်အင်အားအသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ခင်မှာ စစ်ပွဲ၏ ရလဒ်များ (outcomes of war) ကို ချိန်ဆတွက်ချက်လေ့ရှိပါတယ်။ စစ်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေဟာ စစ်ပွဲမတိုင်မီ အခြေအနေထက် ပိုပြီး ဆိုးကျိုးကို ဦးတည်စေရင် စစ်ရေးအင်အားကို အသုံးပြုခြင်း ပြုလုပ်လေ့မရှိပါဘူး။
နောက်ထပ်အချက်တခုကတော့ နောက်ဆုံးနည်းလမ်း (last resort) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ့် အခြားနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၊ သံတမန်နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းမှု၊ constructive engagement ပြုလုပ်မှုစတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ လုံးဝအောင်မြင်မှု မရှိနိုင်မှသာ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
jus in bello function (lit. the law in war) ကတော့ စစ်ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ Geneva law နဲ့ Hague law တွေကို အခြေတည်ထားပါတယ်။ Geneva law က စစ်ရေးပဋိပက္ခရဲ့ သားကောင်တွေကို ကာကွယ်ရေးအပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး၊ Hague law ကတော့ စစ်ပွဲများ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ ဗျူဟာအခင်းအကျင်းတွေ၊ စစ်လက်နက် အသုံးပြုမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ စစ်ရေးပညာရှင်များက jus in bello နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုရဲ့ တရားမျှတမှုကို တိုင်းတာဖို့ criteria နှစ်ခုကို အသုံးပြုပါတယ်။ ပထမတခုကတော့ အချိုးအစား (proportionality) ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယတခုကတော့ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု (discrimination) ဖြစ်ပါတယ်။
အချိုးအစား ဆိုရာမှာ စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်း အသုံးပြုမှု အချိုးအစားဟာ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ အချိုးအစားညီမျှမှု ရှိခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု မပြုလုပ်ခင်က ချမှတ်ထားတဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ သွေဖည်ပြီး၊ collateral damage ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု ဆိုတာကတော့ အရပ်သားများနဲ့ စစ်ရေးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့် အရာများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်ခြင်း ရှိမရှိ ဆိုတာနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစစ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အရပ်သားများနဲ့ စစ်ရေးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့် အရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အကြမ်းဖက်မှု (Terrorism) နဲ့ တရားသောစစ်ပွဲတွေကို ခွဲခြားထားတဲ့ စည်းဘောင်တခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီး စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု (The Use of Force) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (Humanitarian Intervention) အကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
နိုင်ငံတခု (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံအများစုကနေ တခြားနိုင်ငံတခုရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုတဲ့ မူလအခြေခံသဘောတရားမှာ non-military means တွေဖြစ်တဲ့ အရေးပေါ်ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု တို့ဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနဲ့ သံတမန်ရေးရာ နည်းလမ်းများ၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု နည်းလမ်းများဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ခြင်း စတာတွေနဲ့ စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (military intervention) တို့ပါ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စစ်အေးတိုက်ပွဲအလွန် ကာလတွေမှာ non-military means တွေကို humanitarian aid အနေနဲ့ပဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ခေါ်ဆိုအသုံးပြုလာကြပြီး၊ humanitarian intervention ဆိုတာကို military intervention တမျိုးအနေနဲ့ပဲ သတ်မှတ် အသုံးပြုလာကြတာကြောင့် humanitarian intervention နဲ့ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု (The Use of Force) တို့ဟာ ဒွန်တွဲလာပါတော့တယ်။
စစ်ရေးလေ့လာသူတွေက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကို intervention ဆိုင်ရာ အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေနဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒီတွေ အပြိုင်အဆိုင်ကစားကွင်း အနေနဲ့ သုံးသပ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ Intervention optimism (၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်းမြင်ဝါဒ) ဆိုတာက failed states တွေကို နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်ကူညီပြီး နိုင်ငံတော်သစ်ထူထောင်ပေးနိုင်မယ် လို့ ယူဆထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Intervention pessimism (၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း ဆိုင်ရာ အဆိုးမြင်ဝါဒ) ဆိုတာကတော့ humanitarian crisis တွေကို နိုင်ငံတကာက consent မပေးရင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက် ထိန်းသိမ်းခွင့် မရှိဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။
ဒီလို အယူအဆကွဲပြားမှုတွေ ကြောင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲလွန်ကာလမှာ humanitarian intervention နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယူအင်ရဲ့ failures တွေ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆိုးမြင်ဝါဒကြောင့် ရ၀မ်ဒါမှာ ရက်ပေါင်း၁၀၀ ကျော်အတွင်း လူရှစ်သိန်းသေကြေပျက်စီးမှုကို နိုင်ငံတကာက ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားချိန်မှာ UN Peacekeeping force ဖြစ်တဲ့ အင်အားနှစ်ထောင့်ငါးရာရှိ United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) က အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေအကြားက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ တာဝန်နဲ့ ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်၊ အီတလီနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတပ်တွေကလဲ ပဋိပက္ခမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ဥရောပတိုက်သားတွေကို ကယ်တင်ဖို့ နိုင်ငံတွင်းကို ၀င်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အရပ်သားပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်တာဝန် မရှိတဲ့အတွက် ဒီတပ်တွေအနေနဲ့ ရ၀မ်ဒါပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ လူရှစ်သိန်းကျော်သေပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ ပြင်သစ်တပ်တွေက ရ၀မ်ဒါအနောက်ပိုင်းမှာ Humanitarian Protection Zone သတ်မှတ်ဖို့ စစ်အင်အားသုံး ကြိုးပမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါက intervention pessimism ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ failure တခု ဖြစ်ပါတယ်။
intervention optimism ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ failure တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၉၃ ခုမှာ ဆိုမာလီးယားပဋိပက္ခကို ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ UNOSOM II မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအယူအဆ ပဋ္ဋိပက္ခတွေ၊ လူမျိုးစုပဋ္ဋိပက္ခတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစု အများအပြားရှိနေတဲ့ ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံမှာ နယ်မြေဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွေဟာ စစ်ဘုရင်တွေ (warlords) လက်ထဲမှာ ကျရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ famine ဒဏ်တွေကြောင့် ဆိုမာလီးယား ပြည်သူလူထုဟာ ကြီးစွာသော ဒုက္ခတွေ၊ လူမှုဆင်းရဲတွေကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ဘုရင်တွေက humanitarian aid ကို ကန့်သတ်မှုတွေ၊ တားဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်တာကြောင့် ယူအင်က ပါကစ္စတန် တပ်သား ငါးရာ အင်အားရှိတဲ့ Unite Nations Operations in Somalia (UNOSOM I) ကို peacekeeping တာဝန်နဲ့ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ United Task Force (UNITAF) က အင်အားသုံးသောင်း ခုနစ်ထောင်ကျော်နဲ့ ၀င်ရောက်ပြီး demilitarized zones around aid operations ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၃ ရောက်တော့ လုံခြုံရေးကောင်စီ resolution အရ UNITAF က ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကို (UNOSOM II) ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် UNOSOM II ကတော့ ပိုမိုကြီးလေးတဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်နဲ့ ဆိုမားလီးယားမြေပေါ်ကို ၀င်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားနေသော ဆိုမာလီ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများကို အင်အားသုံး လက်နက်ချခိုင်း၍ ဆိုမာလီးယား နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးတွင် ကူညီအားဖြည့်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆိုမားလီးယားစစ်မြေပေါ်က ယူအင်တပ်တွေနဲ့ အခြေအနေက လအနည်းငယ် အတွင်းမှာတင် အင်အားပြုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ရည်မှန်းချက်တာဝန် မပြည့်မှီပဲ ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ ကနဦး UNITAF က ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ demilitarized zones သတ်မှတ်ထားမှုတွေကိုပါ ပျက်ယွင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါက intervention optimism ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ failure တခုပါ။
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြားမှာပဲ ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေခဲ့ရင် intervention လုပ်တာနဲ့ ထိရောက်ပေမယ့်၊ နယ်မြေဒေသ၊ လူမျိုးစုအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ ရှိနေရင်တော့ international intervention လုပ်ရုံနဲ့ မထိရောက်နိုင်ပါဘူး။ လူမျိုးစုတွေအကြားမှာ Reconciliation process ကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ၊ အခန့်မသင့်ရင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်နိုင်မှသာ ရေရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံက သက်သေထူထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ လူမျိုးစုပဋ္ဋိပက္ခများရှိမှု၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစု အများအပြားရှိမှု စတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယူအင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ shadow of Somalia က ရိုက်ခတ်မှု ရှိနေတတ်ပါတယ်။ Humanitarian crisis တွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွေမှာတောင် စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု မပါဝင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေကိုပဲ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ Resolution ဆိုတာ ဒီလို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆိုင်ရာ အကောင်းမြင်ဝါဒ၊ အဆိုးမြင်ဝါဒ အားပြိုင်မှုတွေ၊ shadow of Somalia အကျိုးဆက်တွေ၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ ဗွီအိုအာဏာအသုံးပြုပြီး ပါဝါဂိမ်းကစားမှုတွေ၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊ အကြောင်းတရားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် အားနည်းမှုတွေ အများအပြား ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီလိုအားနည်းချက်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ The Right to Protect (R2P) ဆိုတဲ့ သဘောတရားက ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
R2P ကို ပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တဲ့ အဓိက တွန်းအားကတော့ ကိုဆိုဗို အရေးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဆိုဗိုအရေးမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ဗွီတိုအာဏာကစားပွဲ ပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက် ယူအင်က ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိတဲ့ unilateral intervention တွေကို regional organizations တွေနဲ့ တနိုင်ငံချင်းစီက ပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) က The Responsibility to Protect (R2P) ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ပြီး၊ လူသားချင်းစာနာမှုအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေပြုလုပ်ရန် လိုအပ်တဲ့ သင့်လျော်သော အချိန်ကာလတခုမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့ရင် General Assembly in Emergency Special Sessions မှာ စဉ်းစားဖို့နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက သင့်လျော်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကနဦးဆောင်ရွက်ပြီးမှ ယူအင်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့ ဆိုတဲ့ alternative actions တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
R2P ရဲ့ သဘောတရားက The Use of Force နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ စည်းမျဉ်းတွေကို သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ Just cause အနေနဲ့ လူအများအပြား သေကြေပျက်စီးမှုနှင့် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Humanitarian intervention ရဲ့ precautionary principles အနေနဲ့လဲ မှန်ကန်သော ရည်ရွယ်ချက်၊ နောက်ဆုံးနည်းလမ်း၊ အချိုးအစားညီမျှသော နည်းလမ်းနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလားအလာတို့ကို ထည့်သွင်းထားပြီး၊ operational principles အနေနဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ရည်မှန်းချက်တာဝန်၊ rules of engagement နဲ့ common military approach တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဖော်ပြရရင် ပဋိပက္ခတွေကို ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းများ (peaceful means) နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေကို ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးက လက်ခံခြင်း မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု (The Use of Force) ဆိုတာကတော့ ရှိနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတိုင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ပေမယ့် ရေရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေး (sustainable peace) ကို တည်ဆောက်ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေကလဲ မလွဲသာ မရှောင်သာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။ စစ်အင်အားအပြိုင်အဆိုင်တိုးချဲ့မှုတွေ ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး တွက်ချက်တဲ့ strategic calculus တွေ မှားယွင်းပြီး၊ pre-emptive self-defence မဟာဗျူဟာနဲ့ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုတွေကလဲ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိနေဦးမှာပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း မပြုတဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေ ရှိနေသမျှ ကာလတလျှောက်လုံးမှာလဲ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု အလားအလာတွေ ရှိနေဦးမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု (The Use of Force) ဟာ Just War Doctrine နဲ့ Humanitarian Intervention သဘောတရားတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူးပြုစေမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီသဘောတရားတွေကို ကျော်လွန်သွားတဲ့ အခြေအနေကာလတခုမှာတော့ တတိယကမ္ဘာစစ်ကို ဦးတည် သွားစေမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၁၊ ၃၊ ၂၀၁၁)
(စာရေးသူသည် ယူကေနိုင်ငံမှ စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဆိုင်ရာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိထားပြီး၊ စစ်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသီ တဦး ဖြစ်ပါသည်)
Dower, N(2009)”The Ethics of War and Peace”, Polity Press, Cambridge, UK
Coppieters, B & Fotion, N(2002)”Moral Constraints On War: Principles and Cases”, Lexington Books, Maryland, US.
Elshtain, J.B.(2003)”Just War Against Terror”, Basic Books, New York, US.
Evans, M. (2005)”Just War Theory: A Reappraisal”, Edinburgh University Press, Edinburgh, UK.
Guthrie, C & Quinlan, M(2007)”Just War”, Bloomsbury Publishing, London, UK.
ICISS. The Responsibility to Protect. Supplementary Volume to the Report of the ICISS. Ottawa: International Devlopment Research Centre, 2001.
Johnson, J.T(1981)”Just War Tradition and the Restraint of War”, Princeton University Press, Princeton, US.
Tanca, Antonio. Foreign Armed Intervention in Internal Conflict. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993
United Nations. "United Nations Charter." United Nations. 25 November 2008 .
Weiss, Thomas G. Humanitarian Intervention. Cambridge: Polity Press, 2007.
နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များက paradigm of social orderမှာ မဏ္ဍိုင်သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ ရှုမြင်သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ ဒီသုံးမျိုးကတော့ နိုင်ငံတော် (The state)၊ ဈေးကွက် (The Market) နဲ့ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း (The Civil Society) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်နဲ့ ဈေးကွက်ကို ပထမ မဏ္ဍိုင်နဲ့ ဒုတိယမဏ္ဍိုင်လို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့အတွက် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျတော့ တတိယ မဏ္ဍိုင် လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Civil societyဆိုတဲ့ သဘောတရားကို လူမှု ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးမျိုးမှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားကြပြီး၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အကြားက ဆက်နွယ်မှုတွေမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ သဘောတရား တခုအဖြစ် ယူဆထားကြပါတယ်။ Civil society သဘောတရားကို အထင်ရှားဆုံး ကိုယ်စားပြုဖော်ဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေကတော့ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (non-government organizations or NGOs) တွေပဲ ဖြစ်ပြီး၊ အန်ဂျီအိုတွေကို (civil society organizations or CSOs) တွေအဖြစ်လဲ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (civil society) ဆိုတဲ့ သဘောတရားနဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေဟာ ၂၁ ရာစု၊ ကမ္ဘာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပြယုဂ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်နဲ့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားက ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာ သဏ္ဍာန်များ (State – Civil Society Relational Models) လေးမျိုးကို အခြေခံပြီး၊ civil society သဘောတရားကို ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံတွေ ကွဲပြားပါတယ်။ ဒီလေးမျိုးကတော့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ confrontational model ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ collaborative model ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲ သီးခြားရပ်တည်မှုပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ autonomous model၊ ကြားဝင်စေ့စပ်ဖြေရှင်းခြင်း အပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ mediational modelတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Confrontational Model of Civil Society
ဆယ့်ခုနစ်ရာစုနဲ့ ဆယ့်ရှစ်ရာစုကာလတွေမှာ ဥရောပမှာ modern state systemဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ အကြွင်းမဲ့ အာဏာကျင့်သုံးမှုစနစ်၊ ဘုရင်စနစ်တွေနဲ့ အပြိုင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဒီအတွေးအခေါ်တွေ ထဲမှာ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (civil society) ဆိုတဲ့ သဘောတရားကလဲ စတင်ပေါက်ဖွားလာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေးခေါ် ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Montesquieu နဲ့ Kant တို့ရဲ့ ရေးသားချက်တွေထဲမှာ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာကို အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အကြွင်းမဲ့အာဏာကို ထိန်းညှိစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ မဏ္ဍိုင်တခုအနေနဲ့ ရည်ညွှန်းထားကြ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလက အစပြုပြီး ဥရောပနိုင်ငံရေးဒဿနိကရဲ့ Liberal tradition တခုလုံးမှာ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Neo-conservative tradition မှာလဲ civil society ဆိုတာကို နိုင်ငံတော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သုံးသပ်ပြီး၊ ဈေးကွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးမပါသော မဏ္ဍိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် ပညာရှင် တယောက်ဖြစ်တဲ့ Vaclav Havel ကလဲ civil society ဆိုတာ နိုင်ငံရေးဆန့်ကျင်ခြင်း ဒိုမိန်း (domain of anti-politics) ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်နဲ့ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အကြားက ဆက်နွယ်မှုဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဆက်နွယ်မှု လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Ernest Gellner နဲ့ Şerif Mardin ဆိုသူတို့ကလဲ civil society ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ် ထိန်းချုပ်မှုတွေကို ထိန်းညှိပေးဖို့ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ counter-balancing mechanism လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း၊ ထိန်းညှိပေးခြင်းဆိုင်ရာ Confrontational Model ကို အခြေခံပြီး Civil Society အားကောင်းလာအောင် ပြုလုပ်တဲ့ အန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတွေ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ အများအပြား ရှိပါတယ်။
Autonomous Model of Civil Society
၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း အတွေးအခေါ်က နိုင်ငံတော်နဲ့ civil society ကို ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သတ်မှတ်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး၊ anti-statist ideological agenda အပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ်လို့ ရှုမြင် သုံးသပ်သူတွေလဲ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Civil Society ဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ကွဲပြားခြားနားတာ မှတ်ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်သီးခြား ရပ်တည်တဲ့ မဏ္ဍိုင်တခုသာ ဖြစ်တယ်လို့ Robert Hefner, Keith Tester, David Anderson, Jean Cohen နဲ့ Andrew Arato စတဲ့ civil society theorists တွေက ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Charles Taylor, Larry Diamond, Gordon White, John A. Hall နဲ့ He Baogang စတဲ့ နိုင်ငံရေးပညာရှင်များကလဲ ဒီအဆိုကို လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ Civil Society ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုက လွတ်ကင်းတဲ့ လွတ်လပ်သော အစုအဖွဲ့များ ပါဝင်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်ဖြစ်ကြောင်း Charles Taylor က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Hall ကလဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိပဲ မိမိတို့ဘာသာ သီးခြားစုဖွဲ့မှု ‘societal self-organization’ ဟာ civil society ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ တရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Baogang ကတော့ civil society တည်ရှိမှုဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာ ပေါ်ထွက်နေတဲ့ အသင်းအပင်းတွေဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှု ဘယ်လောက်ကင်းသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာနိုင်ကြောင်း ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
Autonomous Model of Civil Society သဘောတရားတွေကို လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများစွာက လက်ခံ ကျင့်သုံးနေ ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီသဘောတရားတွေဟာ neo-conservative paradigm မှာ အခြေခံတဲ့ civil society ဆိုတာ depoliticized sphere ဆိုတဲ့ အမြင်ကိုတော့ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ လူထုအခြေပြု နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ voluntary social movements paradigm အယူအဆတွေနဲ့ ပိုပြီး ဆက်နွယ်မှု ရှိပါတယ်။
Collaborative Model of Civil Society
၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းနဲ့ ၂၁ ရာစု ကနဦးပိုင်းကာလတွေမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများက နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေဟာ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ဦးတည်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းပေါ် အခြေတည်တဲ့ confrontational model နဲ့ သီးခြားရပ်တည်တဲ့ autonomous model တွေအပြင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် အခြေတည်တဲ့ collaborative model ကိုလဲ ပညာရှင်အများစုက ဦးစားပေး တင်ပြလာကြပါတယ်။ civil society ရဲ့ နိုင်ငံရေးရှုထောင့် (political dimension) ကို အာရုံစိုက်ခြင်း မရှိပဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး စတဲ့ မူဝါဒရေးရာတွေမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ Civil Society Organizations တွေ ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီအယူအဆတွေဟာ civil society ဆိုတာကို depoliticized sphere အဖြစ် ရှုမြင်တဲ့ neo-conservative paradigm အပေါ်မှာ အခြေတည်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရမဟုတ်တဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရတွေနဲ့ အဆင်အပြေဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ အတွက် collaborative model ကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ WHO, UNESCO, UNDP အဖွဲ့အစည်းတွေ အပါအ၀င် Civil Society Organizations တော်တော်များများက အသုံးပြုကြပါတယ်။ Civil Society ဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်မှုကို အထောက်အကူပေးနိုင်ဆုံး model တရပ်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ဒီ Model ကို အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုမယ့် အန်ဂျီအို အဖွဲ့တွေ (အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ငယ်လေးတွေ) အနေနဲ့ civil society ဆိုတာကို depoliticized sphere အဖြစ် ကနဦးရှုမြင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ collaborative model ကို အသုံးပြုပြီးမှ political dimension ကို ထည့်သွင်းလာခဲ့ရင်တော့ အာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ ပြဿနာတက်ရင်တက်၊ မတက်ရင်လဲ အာဏာရှင် အစိုးရရဲ့ အာဏာတည်မြဲရေး အသုံးချခံ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
Mediational Model of Civil Society
တချို့ ပညာရှင်တွေကတော့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ နိုင်ငံတော်နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားက စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် mediating sphere အနေနဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Norton က နိုင်ငံတော်နဲ့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားမှာ mediating structure လိုအပ်ချက်ကို civil society က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့ အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ Sunar ဆိုသူကလဲ အတင်းအကြပ်တိုက်တွန်းခြင်း၊ ချုပ်ခြယ်ခြင်းစတာတွေ မပါတဲ့ စုဖွဲ့မှု ကြားခံ ဒိုမိန်းတခုအနေနဲ့ civil society ကို သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mediational Model ကို လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ အန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတွေက အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကို နိုင်ငံတော် (state) နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း (Society) တို့နဲ့ သီးခြားရှိနေတဲ့ ကြားခံစေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး sphere တခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (Civil Society)နဲ့ Civil Society Organizations (CSOs) တွေအဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ အမြင်တွေကတော့
(၁) အန်ဂျီအိုလုပ်ရင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူး။
ဒီအမြင်က Collaborative Model of Civil Society အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။Confrontational Model နဲ့ Autonomous Model တွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးနဲ့ လူထုအခြေပြုနိုင်ငံရေးကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အန်ဂျီအိုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
(၂) နိုင်ငံရေးမလုပ်ပဲ လူမှုရေးအလုပ်တွေ၊ အန်ဂျီအိုအလုပ်တွေ လုပ်နေတယ်။
ဒီအမြင်က အန်ဂျီအိုအလုပ်ဆိုတာကို depoliticized sphere အနေနဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ကနေ ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှု (political participation) ဆိုတာမှာ ပါတီတည်ထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လွှတ်တော်တွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ conventional politics ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ဆိုတာ ရှိသလို၊ တော်လှန်ရေးတွေ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှု၊ စည်းရုံးရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ လူထုအခြေပြုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ contentious politics ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပဲ ပါဝင်ဦးဆောင်ရုံနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာခြင်း မရှိနိုင်ပါ။ တပ်ဦးကျွှံတဲ့ မအောင်မြင်သော တော်လှန်ရေးတွေပဲ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ လူထုနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ တသားတည်းဖြစ်လာမှသာ အောင်မြင်မှု အလားအလာ ကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် လူထုကို လှေကားချ စည်းရုံးနိုင်ဖို့ အန်ဂျီအိုအလုပ်တွေ၊ Civil Society အားကောင်းလာအောင် ချဲ့ထွင်မှုတွေကိုလဲ politicized sphere အနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမှုတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
(၃) အန်ဂျီအိုတွေ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းလုပ်နေကြတယ်။
Collaborative Model ကို အခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းတဲ့ အန်ဂျီအိုတွေက အာဏာရှင်အစိုးရတွေနဲ့ မဖြစ်မနေ အလုပ်တွဲလုပ်ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တွဲလုပ်ကြတာကို အပြစ်မြင်စရာ မရှိပါ။ သို့ပေမယ့် ဒီလို တွဲလုပ်တဲ့အခါ depoliticized sphere အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး တွဲလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများကိုတော့ အာဏာရှင်အစိုးရတွေက လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် အသုံးမချရဲကြပါဘူး။ Constructive engagement ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တံခါးလေးကို ဖွင့်ထားပေးရုံလောက်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် စာနယ်ဇင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အဖွဲ့ငယ်လေးတွေကိုတော့ လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် အသုံးချနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာရှနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင်က collaborative Model ကို အခြေခံမယ့် အန်ဂျီအိုအဖွဲ့ငယ်လေးတွေကို နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်ဖွဲ့စည်းထားလေ့ရှိကြောင်း ပညာရှင်တွေက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အန်ဂျီအို အားလုံးကိုတော့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်နေတဲ့၊ အာဏာရှင်လက်ကိုင်ဒုတ်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်ပါ။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် Civil Society အားကောင်းမှုဟာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ် (democratization) ရဲ့ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်ခိုင်မာမှု (democratic consolidation) အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တချက် ဖြစ်ပါတယ်။ paradigm of social order ရဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီးတခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Civil Society အားကောင်းလာအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ချက်တွေမှာ ရှုထောင့်တမျိုးတည်းကနေ တကြောင်းဆွဲအမြင်နဲ့ မကြည့်ပဲ၊ ရှုထောင့်စုံကနေ သုံးသပ်ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Model တွေကို ကိုင်စွဲပြီး အငြင်းပွားနေကြတာထက်၊ မိမိကိုင်စွဲ အသုံးပြုနေတဲ့ Model ပေါ်အခြေခံပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ပေါ်လာရေးကိုသာ အာရုံစိုက်သင့်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၆၊ ၃၊ ၂၀၁၁)
Diamond L. (1994) “Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation”, Journal of Democracy, July
Kumar, K. (1993) “Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term”, British Journal of Sociology, vol. 44, pp. 375-95
Havel, V. (1988) “Anti-political Politics”, in Civil Society and the State: New European Perspectives, ed. John Keane, London and New York: Verso, pp. 381-98.
Mardin, S. (1995) “Civil Society and Islam”, in Civil Society: Theory, History and Comparison, ed. John Hall Cambridge: Polity
Mbogori, E. and Chigudu, H. (1999) “Civil Society and Government: A Continuum of Possibilities”, in Civil Society at the Millennium, West Hartford, Conn.: Kumarian Press in cooperation with CIVICUS
Norton, A. (1995) “Introduction”, in Civil Society in the Middle East, ed. Andrew Richard Norton, vol. I, Leiden: E.J. Brill
Richter, M. (1998) “Montesquieu and the Concept of Civil Society”, The European Legacy, vol.3, no. 66, pp. 33-41
Seligman, A. (1992) The Idea of Civil Society, New York: Free Press
Serrano, I. (1994) Civil Society in the Asia-Pacific Region, Washington D.C.: Civicus
Taylor, C. (1990) “Modes of Civil Society”, Public Culture, vol. 3. no. 1, p. 111
White, G. (1994) “Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground”, Democratization, vol. 1, no. 3, p. 379
ဆူနာမီ အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပမြန်မာ အချင်းချင်း ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါ
ရာသီဥတု အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပစိဖိတ် စင်တာမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သော သတင်းအချက် အလက်များအရ ဆူနာမီ အန္တရာယ်သည် ဂျပန်၊ ရုရှား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မာရှယ်ကျွန်းစု၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါပ၀ါနယူရီနီ၊ ဟာဝိုင်အီ၊ အယ်ဆာဘေဒါ၊ ကော့စတာရီကာ၊ နီဂွာရာ၊ ပနားမား၊ ချီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူးနိုင်ငံများအပါအ၀င် နေရာအနှံ့ပြားသို့ သက်ရောက်မှု ရှိနေပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ အနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေမှ ရာသီဥတု သတင်းများကို မျက်ချေမပြတ်နားထောင်ခြင်း၊ အန္တရာယ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်ပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ရန် ရိက္ခာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ထားခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ထားကြပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဆူနာမီ အန္တရာယ် မသက်ရောက်သော ဒေသများမှ မြန်မာများအနေဖြင့်လဲ အောက်ပါလုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို ပြုလုပ်၍ မြန်မာအချင်းချင်း အကူအညီပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
(က) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် မကျရောက်ခင် အခြေအနေ
မိမိတို့နှင့် ရင်းနှီးသူများ၊ အသိအကျွမ်းများသည် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်ပါက ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြား၍ သတိပြုပြင်ဆင်ထားရန် တိုက်တွန်းခြင်း
လိုအပ်ပါက အကူအညီပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာများကို ကြိုတင်ရှာဖွေထားခြင်း
အဆိုပါဒေသတွင် ရှိသော မြန်မာ မိသားစုများအား ဆက်လက်အကြောင်းကြားပေးထားရန် တိုက်တွန်းခြင်း
(ခ) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ထားသော အခြေအနေ
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာ လူမျိုးများသည် ဆူနာမီအန္တရာယ် ငလျင်ဒဏ်ကို ခံစားနေကြရပါသည်။ အဆိုပါ မြန်မာလူမျိုးနှင့် ဆက်စပ်သော အခြားနိုင်ငံပေါင်းစုံမှ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများမှလည်း စိတ်ပူလျက်ရှိပါသည်။ အခြား မည်သည့်နိုင်ငံများသို့ ဆူနာမီ ဂယက် ဆက်လက် ဂယက်ရိုက်ဦးမည် မသိနိုင်သေးပါ။ သို့ဖြစ်ရာ
ဆူနာမီအန္တရာယ် ကျရောက်ထားသော ဒေသမှ မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေများ၊ သိကျွမ်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အခြေအနေကို ဆက်သွယ်၍ ရနိုင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် စုံစမ်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း မိသားစုသို့ အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်သော အခြေအနေများရှိပါက ကောင်းသတင်း၊ ဆိုးသတင်းကို အကြောင်းကြားပေးခြင်း
မိမိတို့ အစုအဖွဲ့အလိုက် အရေးပေါ်ကူညီရန် ရံပုံငွေ ကောက်ခံထားရှိခြင်း
မတော်တဆ အနုမြူယိုစိမ့်မှု အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားလာပါက မိမိနှင့် နီးစပ်သူများ အန္တရာယ်ကင်းလွတ်ရာသို့ ရောက်ရှိစေရန် လိုအပ်သည်များ ကူညီပေးခြင်း
စသည်တို့ဖြင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးများ အချင်းချင်း နီးစပ်ရာ အကူအညီပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ခင်မမမျိုး (၁၁၊ ၃၊ ၂၀၁၁)
TAIWAN / YAP / PHILIPPINES / MARSHALL IS. / BELAU /
NAURU / SOLOMON IS. / KIRIBATI / HOWLAND-BAKER /
LOMBRUM MANUS IS PG 2.0S 147.4E 1205Z 0.49M / 1.6FT 60MIN
HILO HAWAII 19.7N 155.1W 1342Z 1.04M / 3.4FT 60MIN
Statement on Peasant Day in Burma by FBF
တခါတလေကျရင် ငယ်ငယ်တုန်းက သေနတ်ပစ် ကစားတာလေးတွေကို သတိသွားရမိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက သေနတ်ပစ်ကစားတာကို တော်တော်ဝါသနာ ပါပါတယ်။ အိမ်က လူကြီးတွေက ကျောင်းစာမကျက်ပဲ အပြင်စာအုပ်တွေ ဖတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆူရင်လဲ၊ "နားပူအောင်လုပ်ရင် တောခိုမှာ" လို့ ပြန်ပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သေနတ်ပစ်တာတို့၊ တောခိုတာတို့ စတဲ့ စကားလုံးတွေကို ယဉ်ပါးနေရခြင်းကတော့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နေခဲ့တဲ့ တောင်ကြီးမြို့ဆိုတာကလဲ မြို့ပြင်ကို လေးမိုင်လောက် ထွက်လိုက်တာနဲ့တင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ မြို့လေးဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ ကိုးဆယ် ကာလလောက်တွေတုန်းကဆို ဝေးဝေးလံလံသွားပြီး တောခိုစရာ မလိုပါဘူး။ သူ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူ ဆက်သွယ်လို့ ရရင် နေ့ချင်းတောခိုလို့ ရပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ချိန်မှာ ကျွန်မ အသက်သာ ဆယ်နှစ်အထက် ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် တော်လှန်ရေး နယ်မြေထဲ ရောက်သွားခဲ့မှာတော့ အသေအချာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမား မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ရေးလေ့လာသူ တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရတာဟာ ဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ပေါင်းစည်းသွားခဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေ၊ စစ်မြေပုံတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်မ သိပ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် တိုက်ပွဲမြေပုံလေးတွေ စာအုပ်တွေထဲမှာ တွေ့ရင် ကူးဆွဲပြီး ဘယ်စစ်မျက်နှာမှာ ဘယ်တပ်တွေ တပ်စွဲတယ်၊ ဘယ်တပ်တွေ ထိတွေ့မှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တကူးတက လိုက်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာစစ်တင်မက ပြည်တွင်းစစ် ရေးရာတွေဆိုလဲ ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့ပါပဲ။ ကြူကုတ်- ပန်ဆိုင်း၊ ပါဂျို- နားဖော့၊ မိုင်းယန်း၊ မဲသဝေါ တိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တာတွေဆို ဗလာစာအုပ်လေးတွေ သီးခြားခွဲပြီး အချက်အလက်တွေ လိုက်မှတ်ရတာ အမော။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ကလေးဘ၀မှာ စာကျက်လိုက်၊ စာဖတ်လိုက်လုပ်ရင်း တခါတလေကျတော့လဲ အိမ်ကိုလာဆော့တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ သေနတ်ပစ်တမ်း ကစားပါတယ်။ အိမ်က အရုပ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင် သေနတ်ပဲ ပူဆာတာမို့ ကျွန်မဆီမှာ ကလေးကစားစရာ သေနတ်တွေကလဲ အတော်စုံတာကလား။ ဒီအထဲမှာမှ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးသေနတ်က ၀ါးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စက်သေနတ်ပါ။ မေမေ့လူနာတဦး ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသွားဖူးပြီး အပြန်မှာ လမ်းမှာတွေ့လို့ ၀ယ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီစက်သေနတ်လေးက တခြားသေနတ်တွေလို ကော်လုံးလေးတွေထည့်ပြီး ပစ်လို့မရပေမယ့် သံမောင်းတံလေးကို ဆက်တိုက်လှည့်ရင် ဒက်...ဒက်.....ဒက် လို့ အသံမြည်ပါတယ်။ ကျွန်မသေနတ်လေးက ဒက်...ဒက်...ဒက် လို့ မြည်နေတော့ ကျွန်မလဲ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဒါလေးကို တကိုင်ကိုင်ပေါ့။ ကိုယ့်အချင်းချင်းကြားမှာ ဒက်...ဒက်...ဒက် လုပ်လိုက်၊ အချင်းချင်း သူပစ်တယ်၊ ငါ ပစ်တယ် လုပ်လိုက်၊ သေနတ်ကောင်းကြောင်း ပြိုင်လိုက်နဲ့ ဟုတ်နေတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ တနေ့မှာတော့ ခြံထဲမှာ တကယ့်သေနတ်သံတွေ ထွက်လာတာကို ကြုံရပါလေရော။ ကျွန်မနေတဲ့ ခြံက သုံးဧကခွဲလောက် ကျယ်ပြီး သစ်ပင်ကြီးတွေလဲ အများအပြား ရှိပါတယ်။ လမ်းမပေါ်ကနေ ခြံထဲက ကားလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာရင် ၃ မိနစ်လောက်အကြာမှာ ရှေ့ပြေးအိမ်လေးကို ရောက်ပြီး၊ နောက်ထပ် နည်းနည်းလေး ဆက်တက်လာမှ အိမ်မကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ ခြံရဲ့ဗယ်ဘက်ခြမ်းမှာက တောင်ပေါ်ဘက်တက်တဲ့ လူသွားလမ်းလေးရှိပြီး၊ ညာဘက်ခြမ်းကျတော့ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဝင်း ရှိပါတယ်။ အိမ်နဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး ၀င်းအကြားမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေ ရှိနေတာကြောင့် တောအုပ်တခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တောင်ပေါ်က စီးလာတဲ့ ရေချောင်းလေးတခုကလဲ ခြံထဲကနေ ဖြတ်ပြီး စီးပါသေးတယ်။
ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ဘိုးဘွားတွေ စစ်ပြေးနေတော့ လွတ်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ခြံမှာ ဂျပန်တွေက စစ်ရုံးဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၁၉၂၀) ကာလကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရှေးအိမ်လက်ရာ မပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့် ခေါင်မိုးတွေကိုတော့ ပြန်လဲထားရပါတယ်။ မဟာမိတ်စစ် လေယာဉ်တွေက စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့တာကြောင့် ခေါင်မိုးမှာ မိုးယိုလို့ပါ။ ကျွန်မတို့အိမ် မြေတိုက်ကနေ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဝင်းထဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းရှိတယ်လို့လဲ ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှိုဏ်ခေါင်းဝေးလို့၊ မြေတိုက်ထဲတောင် ဘယ်သူမှ ဆင်းမကြည့်ရဲကြပါဘူး။ ခြံရဲ့ အနောက်ဘက်မှာကျတော့လဲ လူနေအိမ်တချို့ ရှိပေမယ့် ခြံထဲမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေ များတာကြောင့် အတော်အလှမ်းဝေးပါတယ်။ တောအုပ်လို ဖြစ်နေပြီး၊ မြွေတွေလဲ ရှိပါတယ်။ တခါတလေ ခေါင်းနှစ်လုံးပါတဲ့ မြွေလေးတွေ အိမ်နားရောက်လာတာကိုပါ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ မြေပြင်အနေအထားအရ ကျွန်မတို့ခြံဟာ သူခိုး၊ ဓားပြတွေအဖို့ အတော်မျက်စိကျစရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ညနေခြောက်နာရီထိုးတာနဲ့ အိမ်ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက် တံခါးတွေအားလုံးကို သေချာလိုက်စစ်ကြရပါတယ်။ အိမ်အပြင်ကနေ ဧည့်ခန်းကိုရောက်ဖို့ တံခါးသုံးခုလောက်ကို ဖြတ်ရပြီး၊ အိပ်ခန်းတွေကို ရောက်ဖို့ တံခါးလေးခုလောက် ဖြတ်ရတာကြောင့် အိပ်ခါနီးမှာ တံခါးတွေအားလုံးကို သေချာလိုက်ပိတ်ရပါတယ်။ အဘိုးရှိစဉ်ကတော့ ခေတ်အခြေအနေအရ ခြံစောင့်အပြင် အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးကြီးတွေ မွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ခေတ်ရောက်တော့ အယ်လ်ဇေးရှင်းမဟုတ်ပဲ သာမန်ခွေး ဆယ့်ငါးကောင်လောက်ပဲ မွေးထားခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုလုံခြုံရေးတွေ ယူထားပါလျက်နဲ့ ဓားပြတွေက ကြံကြံဖန်ဖန် ခြံထဲကို ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ (၁၉၉၀) ကျော် ကာလလေး တခုမှာပါ။ အချိန်က ညကိုးနာရီကျော်လောက်ပါ။ အိမ်မှာက အမျိုးသားအလုပ်သမားတွေကို ညအိပ်ညနေ၊ နေခွင့်မပေးတာကြောင့် ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်မတို့ မိသားစုနဲ့ အမျိုးသမီး အိမ်အကူပဲ ရှိပါတယ်။ မိသားစုမှာကလဲ အဖိုးဆုံးပြီးကတည်းက မိန်းမသားတွေချည်းပဲ ကျန်ခဲ့ကြတာပါ။
ပထမဆုံး အိမ်အနောက်ဘက် ခြံထဲကနေ သေနတ်သံနှစ်ချက် ထွက်လာပါတယ်။ ခွေးဟောင်သံတွေကလဲ ဆူညံနေတာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ နယ်မြို့လေးတွေမှာ အလုပ်တာဝန်ကျဖူးတဲ့ အမေက သေနတ်သံကြားတာနဲ့ အခြေအနေကို ချက်ချင်းရိပ်မိသွားပါတယ်။ အားလုံးကို ကုတင်အောက်မှာ ၀ပ်နေဖို့ပြောပြီး ဖုန်းရှိရာကို သွားပါတယ်။ နံပါတ်က နံရံမှာ ကပ်ထားတာကြောင့် ရဲစခန်းကို အလွယ်တကူ ခေါ်နိုင်သွားပါတယ်။ ဖုန်းက ပြောနေရင်းနဲ့ လိုင်းပြတ်သွားပါတယ်။ မကြာပါဘူး။ မီးတွေလဲ မှောင်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အိမ်ရှေ့ကနေ တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ အော်ကြပါတော့တယ်။ ဂျပန်ခေတ်ဖြတ်ဖူးတဲ့ အဖွားက ဓားဆွဲထားပါပြီ။ အဖွားက အိပ်ယာဘေးက နံရံမှာ ဓားထောင်ပြီးမှ အိပ်လေ့ရှိတာပါ။
အမေကတော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးပီပီ လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး သေးသေးလေးနဲ့ မီးခံသေတ္တာထဲက လက်ဝတ်ရတနာ အစစ်တွေကို ထုတ်ပြီး၊ အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ အတုဘူးတွေနဲ့ လဲထည့်ပြီး၊ အစစ်တွေကို နံရံချောင်ကြိုချောင်ကြားတွေမှာ ထည့်ပါတယ်။ ဘီဒိုထဲက ငွေစက္ကူအုပ်အချို့ကို ထုတ်ပြီး အ၀တ်တွေကြားမှာ ရောထည့်ထား လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ၀ါးသေနတ်ကြီးကို သေနတ်အစစ် မဖြစ်ရကောင်းလား ဆိုပြီး ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေပါတယ်။ အရေးကြုံနေချိန်မှာ ကျွန်မမိသားစုကို ကာကွယ်လိုပါတယ်။ ပြောမယ့်သာပြောရတယ်။ ဒီတုန်းက ကျွန်မအသက်က ဆယ်နှစ်သာသာလေးပါ။
အိမ်ရှေ့ကနေ တံခါးမဖွင့်ပေးရင် ပစ်ဖွင့်မယ်လို့ အော်သံတွေက တရစပ်ထွက်နေပါတယ်။ ကံကောင်းတာက တံခါးက သစ်သားတံခါးအပြင် သံပန်းတံခါးပါ တပ်ထားတာကြောင့် အပြင်က ဖွင့်ရခက်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်တွေမှာကလဲ သံပန်းတွေတပ်ထားတာကြောင့် သူတို့အခက်တွေ့နေပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလဲ တိတ်တိတ်လေးပဲ နေကြပါတယ်။ အတော့်ကို ရင်ဖိုရတဲ့ အချိန်ပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်ခန်းကို ရောက်လာဖို့က တံခါးလေးထပ်လောက် ကျော်ရမှာမို့ အခြေအနေက ကျွန်မတို့ဘက်က အနည်းငယ် အားသာနေပါတယ်။ မကြာပါဘူး။ ဆူဆူညံညံအသံတွေနဲ့ အလင်းရောင် တချို့ကို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ပစ်ခတ်သံတွေတော့ မကြားရပါဘူး။ ပြီးတော့မှ "အစ်မကြီး၊ ကျွန်တော်တို့ပါ၊ ဟိုကောင်တွေ ပြေးပြီ" ဆိုတဲ့ အသံကို အိမ်ရှေ့က ကြားရပါတယ်။ အမေက အိမ်ရှေ့ကို မှောက်လျက်လေး ရွှေ့သွားပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေ ခိုးကြည့်ပါတယ်။ ရဲယူနီဖောင်းတွေ တွေ့ပေမယ့် အမေက တွေဝေနေတုန်းပဲလို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။ ရပ်ကွက်လူကြီး တယောက်ကို တွေ့လိုက်တော့မှ တကယ့်ဓားပြတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ယုံသွားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီညက ကျွန်မတို့ခြံထဲ ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဓားပြအဖွဲ့ကို လုပ်သေနတ်တွေနဲ့ ဖမ်းမိတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်းတယက ပွေးလှနယ်ဘက်မှာ ကျွန်မတို့ မိတ်ဆွေကုန်သည်အိမ်ကို ဓားပြတိုက်မှုနဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့မိသားစုနဲ့ ပွေးလှနယ်ကလဲ ရေစက်က တော်တော်ပါတာပါ။ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားစဉ်ကာလတလျှောက်လုံး အမေက ဆရာဝန်အနေနဲ့ ပွေးလှတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျခဲ့တာပါ။ ဒီတုန်းကဆို အဲဒီဘက်မှာ ကားလမ်းဓားပြ တိုက်တာတွေလဲ ရှိတယ်ဆိုပဲ။ တခါက ကားလမ်းကို သစ်ကိုင်းနဲ့ တားပြီးပိတ်ထားတာကို အမေက ကိုယ်ဝန်ခုနစ်လနဲ့ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး သစ်ကိုင်းကို ဆင်းဖယ်သတဲ့။ အဲဒီမှာ လူတယောက် ရောက်လာပြီး "ဆရာမကားကို ဒီနေရာက မြန်မြန်သွားခိုင်းလိုက်ပါ၊ နောက်ထပ် နှစ်ရက် လုံးဝ ပြန်မလာပါနဲ့ လို့ မှာခိုင်းလိုက်တယ်" လို့ ပြောသတဲ့။ အမေကတော့ သူကုပေးခဲ့တဲ့ လူနာတယောက်ယောက်ဖြစ်နေလို့ မှတ်မိပြီး လွှတ်ပေးလိုက်တာနေမှာ လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ ကျွန်မတို့ခြံကို ဓားပြတိုက်ဖို့ လုပ်ခဲ့သူများကလဲ ဒီနယ်မြေနဲ့ တစွန်းတစ ဆက်စပ်သူများ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလဲ ဒီနယ်မြေကို ခဏခဏ အလည်သွားနေကျ၊ သွားတဲ့အခါတိုင်းလဲ သူတို့ဓားပြတိုက်ခဲ့တဲ့ ကုန်သည်အိမ်မှာပဲ တည်းနေကျပါ။ ဓားပြတွေက နှစ်အိမ်လုံးကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဓားပြတိုက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းထောက်မလို့ အတိုက်မခံလိုက်ရတာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက သေနတ်ပစ်တမ်း ကစားခဲ့တာလေးတွေကို သတိရမိရင် ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုလဲ သတိသွားရမိနေဆဲပါ။ သေချာတာတခုကတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ သေနတ်ပစ်တမ်း မကစားတော့ဘူး။ ဒက်...ဒက်....ဒက် လို့ အသံပဲထွက်ပြီး၊ ဘေးအန္တရာယ် အမှန်တကယ် ကြုံချိန်မှာ ရန်သူကို မချေမှုန်းနိုင်တဲ့ သေနတ်ကြီးကို ကျွန်မ မကိုင်ချင်တော့တာကြောင့်ပါ။ ၀ါးသေနတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး ကလေးတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ သူ့သေနတ်က အသံပိုထွက်တယ်၊ ငါ့သေနတ်က အသံပိုထွက်တယ်လို့ ပြိုင်ရဆိုင်ရ၊ သူ့သေနတ်လှတယ်၊ ငါ့သေနတ်လှတယ်နဲ့ အပြန်အလှန် ချီးကျူးရ နဲ့ အချိန်ကုန်နေတာထက်၊ ရန်သူကို အမှန်တကယ် ချေမှုန်းနိုင်တဲ့ သေနတ်ကြီးတလက် ကိုင်ချင်လာခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ခင်မမမျိုး (၂၈၊ ၂၊ ၂၀၁၁)